အိမ်ထောင်ရေး ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော 'ရင်ဘတ်ထဲကဓား' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မကြာမီ ရုံတင်ပြသတော့မည? - Yangon Media Group
အိမ်ထောင်ရေး ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော ‘ရင်ဘတ်ထဲကဓား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မကြာမီ ရုံတင်ပြသတော့မည?
အိမ်ထောင်ရေးပညာပေးအနေဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ‘ရင်ဘတ်ထဲက ဓား’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှစတင်ကာ ရုံတင်ပြသတော့မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ‘ရင်ဘတ်ထဲကဓား’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Press Show ပြသခြင်းကို အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
”ဒီဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က တည်းကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို မရိုက် ကူးခင်ကတည်းက သေချာပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အတွက် ရိုက်ကူးချိန်မှာ အခက်အခဲဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားကို လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတတစ်ခုခုရမယ်ဆိုရင် ပဲကျေနပ်တယ်”ဟု ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ပြောသည်။ ရင်ဘတ်ထဲကဓား’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း၊ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဝိုင်းမှ တာဝန်ယူရိုက်ကူးထားပြီး သရုပ် ဆောင် ပြေတီဦး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ မေကဗျာတို့မှ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြောင်းသိရသည်။
”လရိပ်ဝေးလို့ ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတာတွေကိုလည်း မျက်နှာမှာပေါ်အောင်ပြတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ သူသည်းမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ ခံစားချက်လေးတွေပေါ့နော်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော့ အိမ်ထောင်သည်တွေ နှစ်ယောက်အတူတူလာပြီးတော့ ကြည့်စေချင်ပါတယ်”ဟု သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ပြောသည်။ ”ရင်ဘတ်ထဲကဓား”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးသည် လက်ရှိ အိမ် ထောင်သည်များကြုံတွေ့နေရသော အခြေအနေများ၊ အိမ်ထောင် ရေးဖောက်ပြန်လာမှုအခြေအနေတို့ကို အဓိကပုံဖော်ရိုက်ကူးထား ခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကို ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် ချဲလ်ဆီးအသင်းမှ ထွက်ခွာလိုခဲ့ကြောင်း ဟာဇက် ဝန်ခံ